Liverpool ayaa la kulantay guuldaradii 3aad ee isku xigta ee Premier League kadib markii Leicester 3-1… – Hagaag.com
Liverpool ayaa la kulantay guuldaradii 3aad ee isku xigta ee Premier League kadib markii Leicester 3-1…
Posted on 13 Febraayo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Kooxda difaacaneysa horyaalnimada Premier League ee Liverpool ayaa la kulantay guuldaradii seddexaad oo isku xigta ee Premier League Ingriiska, kadib markii guuldarro ka soo gaartay Leicester City 3-1 maanta oo Sabti ah wareega 24aad ee Premier League.
Leicester City ayaa sare u qaaday dhibcaheeda waxay gaartay 46 dhibcood si ay u soo ceshato kaalinta labaad, 4 dhibic ayay ka hooseysaa kooxda hogaanka heysa ee Manchester City, sidoo kale waxay hal dhibic ka sareysaa Manchester United, halka Liverpool ay ku dhegtay 40 dhibcood oo ay ku jirto kaalinta afaraad waxayna musharax u tahay inay ka baxdo sanduuqa dahabiga ah.
Liverpool ayaa goolasha ku daah furtay gool uu dhaliyay xiddiga reer Masar ee Mohamed salah daqiiqadii 67-aad, ciyaaryahanka ayaa kor u qaaday goolashiisa oo uu ka dhigay 17-gool, si uu keli ugu noqdo kala sarreynta liiska gooldhalinta ee horyaalka, 4 gool ayuu ka horreeyaa kan ugu soo dhow.
Kadib Leicester City ayaa ciyaarta u rogtay dhanka ay jeceshahay waxayna ku xalisay seddex gool 5 daqiiqo gudahood, waxaana kala dhaliyay James Madison, Jimmy Vardy iyo Harvey Barnes daqiiqadihii 80aad, 81aad iyo 85aad.
Jürgen Klopp ayaa lumiyay caqligiisa ka dib goolkii seddexaad oo muuqaal dhif ah ku muujinaya dhibaatada kooxda oo”clinically” la dhihi karo inay sidaasi uga baxday tartanka horyaalka.
Guuldarada ka soo gaadhay ciyaartii maanta waxay laba jibaaraysay dhibaatada Liverpool ka soo gaadhay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka oo Brighton 1-0 iyo Manchester City 1-4 uga badiyeen.
Leicester City ayaa ka aargudatay guuldaradii ay dhadhansiisay Liverpool 0-3, bishii November ee la soo dhaafay wareega 9aad ee horyaalka.